Soosaarida Mashiinka Qalinka Tattoo-la'aanta Shiinaha | Warshad | MOLONG
Mashiinka Tattoo-ku waa aaladaha lagama maarmaanka u ah habka wax lagu sawirayo. Farshaxanle kasta oo tattoo wuxuu ku bixiyaa lacagta saxda ah iibsashada mashiinka tattoo. Mashiinka aan hadda isticmaaleyno waa mid horumarsan oo la socda waxyaabo badan, waxaa jira horumaro teknoolojiyadeed oo badan oo ku dhacay mashiinka sawirka.
Mashiinnada Tattoo-ka ayaa xaqiiqdii ah sababta ugu muhiimsan ee ka dambeysa astaamo taam ah. Darajadani waxay ka caawineysaa farshaxanistaha farshaxanimada hagaajinta farshaxanka.
Marka la eego horumarinta alaabada cusub ee tattoo-ga ee warshadaha oo dhan, qalabka korontada ku shaqeeya iyo mashiinnada qalinka bilaa wireless ayaa ah kuwa ugu muhiimsan, isbeddelkuna wuxuu ku sii kordhayaa wireless-ka. Qalab dhaqameed kala duwan oo tattoo ah sida fiilooyinka iyo leexashada cagaha ayaa laga saaray, taas oo u baahan oo keliya mashiinka qalinka mashiinka qalinka lagu qaato iyo irbadda taarikada taatikada. Way fududahay in la qaado, waxayna siisaa sahlanaan weyn fanaaniinta sawirada ee u yimaada inay sameeyaan adeegyo tattoo-guri-ka-guri ah ama ay ku sameystaan ​​astaamo banaanka ah. Marka waxaan baarnay oo aan soosaarnay mashiinka qalinka batteriga taatikada dib u buuxin kara. Marka la eego, waxaan ku jirnaa booska hoggaamineed ee warshadaha.
Halkan waxaad ku tusi kartaa qaar ka mid ah mashiinnada qalinka tattoo-gacmeedka wanaagsan. Oo sii wad raacida MOLONG TATTOO SUPPLY, si ay kuu siiso waxyaabo cusub oo ka sii fiican oo qalabka tattoo-ga ah.